Waa maxay sii jiritaan: sifooyinka iyo noocyada | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
waa maxay waaritaan
Jarmal Portillo | 14/04/2022 12:00 | Deegaanka
Deegaanka waxaa sii kordheysa u saameeya ficilka aadanaha. Sidan oo kale waa heerka aynu kaga faa’iidaysanayno kheyraadka dabiiciga ah ee aanu dhulku wakhti u helin inuu dib u soo kabsado. Taas awgeed, fikradda joogtaynta ayaa dhalatay. Dad badan ayaan garanayn waa maxay waaritaan Maxaase loogu talagalay mustaqbalka fog?
Sababtaas awgeed, waxaanu maqaalkan u huray inaanu idiinka warramo waxa ay tahay sii jiritaanku, dhinacyada iyo faa’iidooyinka ay u leeyihiin bulshada iyo deegaanka.
1 waa maxay waaritaan
2 Fikradda waaraya ee heer bulsho
3 Noocyada waara
3.1 ilaalinta deegaanka
3.2 Dhaqaalaynta dhaqaalaha
4 Tusaalooyinka Waarta
Si fudud loo dhigo, sii jiritaanku waa maaraynta agabka si loo daboolo baahiyaha hadda jira iyada oo aan khatar gelin baahiyaha mustaqbalka. Tani waxay ku xisaabtamaysaa horumarinta bulshada, dhaqaalaha iyo ilaalinta deegaanka ee qaabka maamulka. Marka hore, sii jiritaanku waxay u malaynaysaa in dabeecadda iyo deegaanku aanay ahayn kheyraad aan la koobi karin taas oo ay tahay in la ilaaliyo oo loo isticmaalo si macquul ah.
Marka labaad, horumarka waara waxa uu ku saabsan yahay horumarinta bulshada iyo raadinta isku-dhafka bulshada iyo dhaqanka. Sidan oo kale, waxay doonaysaa inay gaadho heer lagu qanco oo tayo nololeed, caafimaad iyo waxbarasho. Seddexaad, sii jiritaanku waxa ay horseedaa koboc dhaqaale, waxaanay abuurtaa hanti loo siman yahay oo dhammaanteed iyada oo aan waxyeello loo geysan deegaanka.
Joogteynta waxaa lagu qeexaa sida daboolida baahiyaha jira iyada oo aan la wiiqin awoodda jiilalka mustaqbalka si ay u daboolaan baahidooda, hubinta dheelitirka u dhexeeya kobaca dhaqaalaha, ilaalinta deegaanka iyo daryeelka bulshada.
Fikradda waaraya ee heer bulsho
Waaritaanku waa tusaalaha horumarka ee ilaalinaya dheelitirnaantan jilicsan maanta iyada oo aan khatar gelinayn kheyraadka berrito. Si aad u hesho waa lagama maarmaan in lagu dhaqmo qaanuunka 3 rs, xeerka 5 rs, oo ay yareeyaan qashinka iyo qashinka. Ficiladan oo kale, waxaan kula dagaalami karnaa isbeddelka cimilada iyo kulaylka caalamiga ah.
Fikradda hadda jirta ee sii jiritaanku waxay u muuqatay markii ugu horreysay daabacaadda 1987 ee Warbixinta Brundtland, oo sidoo kale loo yaqaanno Mustaqbalkeenna Wadajirka ah. Haddaba, dukumeentiga loo diyaariyey Qaramada Midoobay waa kii ugu horreeyay ee ka digaya saameynta xun ee horumarka dhaqaalaha iyo caalamiyeynta adduunka. deegaanka. Sidaa darteed, Qaramada Midoobay waxay doonaysaa inay xal u hesho dhibaatooyinka ka dhasha warshadaynta iyo korodhka dadweynaha.
Joogteynta waxa ay ku duugan tahay dhowr fikradood oo la xiriira, sida waaritaanka deegaanka, waaritaanka bulshada iyo joogteynta dhaqaalaha. Sidaa darteed, caqabado badan oo soo wajaha aadanaha, sida isbeddelka cimilada ama biyo-la'aanta, waxaa lagu xallin karaa oo keliya marka laga eego aragtida caalamiga ah iyo in kor loo qaado horumar waara.
Joogitaanka deegaanku waa barnaamij diiradda saaraya ilaalinta kala duwanaanshaha noolaha iyada oo aan laga tanaasulin horumarka dhaqaale iyo bulsho.
Waxa loola jeedaa awoodda dhinaca bayoolojiga si ay u ilaaliso wax soo saarkeeda iyo kala duwanaanshaheeda waqti ka dib, sidaas darteed kobcinta masuuliyad miyir leh oo ku wajahan ecology si loo ilaaliyo kheyraadka dabiiciga ah, iyada oo kor loo qaadayo horumarinta aadanaha si loo daryeelo deegaanka ay ku nool yihiin. Waxaa jira shirkado iyo ganacsiyo badan oo hadda wada isbeddelladan.
Joogteynta dhaqaale waxay hubisaa in waxqabadyada raadinaya sii jiritaan deegaan iyo bulsho ay faa'iido leeyihiin.
Waxaa loola jeedaa Awood u lahaanshaha abuurista maalka qaab xaddi ku filan. in loo sinnaado dhinacyada kala duwan ee bulshada, awoodda iyo xallinta dhibaatooyinka dhaqaale ee dadweynaha, iyo xoojinta wax-soo-saarka iyo isticmaalka qaybaha lacag-soo-saarka. Marka la soo koobo, baahida qancisa iyada oo aan la hurin jiilalka mustaqbalka waa isku dheelitirnaanta aadanaha iyo dabeecadda.
Joogitaanka bulsheed waxay raadinaysaa isku-duubnida iyo xasilloonida dadweynaha. Waxa loola jeedaa qaadashada qiyamka soo saara dabeecadaha sida qiyamka dabiiciga ah, ilaalinta a heerka waxbarashada, tababarka iyo wacyiga ku qanacsan, in la taageero dadka dalka si ay naftooda u horumariyaan oo ay u ilaashadaan heerka nololeed ee wanaagsan, korna u qaadaan ka qaybgalka muwaadiniinta. dadkaas oo ku dhex abuura wax ku cusub bulshada maanta.
Waaritaanka siyaasaddu waxay raadisaa dawladnimo sharciyo cad oo lagu dheelli tiro deegaanka, dhaqaalaha iyo bulshada. Waxaa loola jeedaa dib-u-qeybsiga awoodaha siyaasadeed iyo dhaqaale, dowladda oo leh xeerar joogto ah, dowlad ammaan ah, sameynta qaab-dhismeed sharci waxay dammaanad qaadaysaa ixtiraamka dadka iyo deegaanka, iyo horumarinta wadajirka bulshada iyo gobollada si kor loogu qaado tayada noloshooda. nolosha In la yareeyo ku tiirsanaanta bulshooyinka ee jiilka qaab-dhismeedka dimoqraadiyadda.
Hoos waxaa ku yaal tusaalooyin horumarineed oo waara si fikraddan loogu dhaqmo dhammaan qaybaha nolosheenna.
Heer caalami, waxaa jira ururo kala duwan oo waxay nagu hagaan oo nagu raacaan dariiqa horumar waara iyo mowduucyo kale sida daryeelka deegaanka, kulaylka adduunka, isbeddelka cimilada, iwm.
Madasha Siyaasadda Heerka Sare ee Horumarka Waara, natiijadii Shirkii Qaramada Midoobay ee 2012 ee Horumarinta Waarta (Rio+20), ayaa beddelay Guddiga Horumarinta Joogtada ah. Madashu waa hay’ad hoos timaada Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada iyo Golaha Guud.
Komishanka Horumarinta Joogtada ah waa hay'ad hoosaad ka tirsan Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada wuxuuna leeyahay mas'uuliyadda aasaasiga ah dhammaan arrimaha deegaanka. Gudida Dawlada Dhexe ee Isbadalka Cimilada waa unug khabiiro gaar ah oo dib u eegis ku sameeya cilmi baadhista sayniska oo ogaysiiya siyaasad-dejiyeyaasha.
Golaha Qaramada Midoobay ee Kaymaha waa hay'ad hoosaad oo ka tirsan Golaha Dhaqaalaha iyo Bulshada; waxay fulisaa shaqada labada hay'adood ee ka horreeyay ee hoos ku qoran. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan deegaanka (UNEP) waa afhayeenka deegaanka ee nidaamka Qaramada Midoobay. UNEP waxay u shaqeysaa sidii dhiirigeliye, karti-bixiye, bare iyo fududeeye si caqli-gal ah u adeegsiga iyo horumarka waara ee deegaanka caalamiga ah.
Sida aad arki karto, dhammaan dhinacyadani waxay aasaas u yihiin ilaalinta deegaanka iyo horumarinta dhaqaalaha iyo bulshada. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto waxa ay tahay sii jiritaankeeda iyo faa'iidooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » waa maxay waaritaan